‘संघियता चाहिँदैन खारेज गरौं’ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र : माग पुरा नभए जनकारवाहीमा जाने चेतावनी, अब के गर्छ सरकार ? « Etajakhabar
‘संघियता चाहिँदैन खारेज गरौं’ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र : माग पुरा नभए जनकारवाहीमा जाने चेतावनी, अब के गर्छ सरकार ?
काठमाडौ । बेला बेलामा संघियताका बारेमा बहस हुन्छ । सानो मुलुकमा संघियतालाई धान्न आर्थिक रुपले मुस्किल पर्ने भएकाले खारेज गर्नुपर्ने आवाज कहिले काँही उठ्ने गरेको छ । चित्रवहादुर केसीको पार्टीले यहि उद्देश्य राखेको छ । तर औपचारीक रुपममा संघियता खारेजको माग राख्दै समाजवादी केन्द्र नेपालले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सो पार्टीले संघियता खारेज लगायत विभिन्न २८ वटा माग राख्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । बुधबार सो पार्टीका अध्यक्ष युवराज सफलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । आफ्ना माग पूरा गर्न सो पार्टीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ३५ दिनको समयसीमा दिएको छ । निर्धारित समयभित्र माग पूरा नभएमा आफूहरु जनविद्रोहमा जाने तथा जनकारवाहीमा जाने चेतावनी पनि ज्ञापनपत्रमार्फत दिइएको छ ।
सो पार्टीले संघीयता खारेज गरी नयाँ ढंगले राज्य पुनर्संरचना गर्न, एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न, धर्म निरपेक्षता खारेज गरी वैदिक सनातनी धार्मिक व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको छ । यस्तै, उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न, सर्वपक्षीय बृहद् राष्ट्रिय राजनीतिकसभा आयोजना गरी संविधान संशोधन गर्न, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका नागरिकलाई राष्ट्रिय जनगणनामा सामेल गराउन पनि सो पार्टीले माग गरेको छ ।